Ustaaz Bushraa Yahyaa – Wiirtuu Odeeffannoo Muslimtoota Oromiyaa
Ustaaz Bushraa Yahyaa erga adabbiin hidhaa waggaa jaha fii Ji’a jaha itti murtaayeen booda ergaa hawaasaaf dabarsan.
Ustaaz Bushraa Yahyaa yemmuu murtiin adabbii haqaan alaa (sobaa) irratti murtaa’e jabinnii fii tasgabbiin irratti mul’ataa ture. xummuramuu dhaddachichaa booda Ustaaz Yahyaan yoommuu mana murtiitii gad bayan hawaasa Magaalaa Maqalee fii Magaalaa Wuqiroo irraa dhaddacha haqaan alaa (sobaa) hordofuuf dhufan yommuu ilaalu isaanii irratti jeequmsa waan arganiin ergaa armaan gadii hawaasaaf dabarsaniiru.
Ustaaz Bushraa Yahyaa ergaa dabarsan keessatti:
“Nuti kan hidhamne nama ajjeesnee ykn immoo Malaammaltummaa hojjennee osoo hin ta’iin Islaamummaaf jenneeti. Akka Rabbi hidhaa kana nurraa qeebalu du’aayii nuuf godhaa. Isin keessaa namni Mana murtii kana irraa haqa barbaadaa/eeggachaa ture yoo jiraate kunoo haqi Mana Murtichaa kana fakkaata. Isun keessaa Haqa Rabbi irraa kan eegaa ture yoo jiraate garuu du’aayii nuuf godhaa” jechuudhaan haasawa onnee namaa xuqu taassisuun hawaasa danuu dhaddachaa haqaan alaa (sobaa) hordofuuf mana murtichaatti argaman tasgabeessaniiru.
Rabbi tasgabbii fi jajjabina isaa haa kennuuf
Suuraan armaan gaditti argitan suuraa ustaaz Bushraa Yahyaa yommuu ta’u ustaaz Bushraa bara 1992 barreeffama Qorannoo “Itiyoophiyaa fi Islaama” jedhu siympooziyeemii irratti dhiyeessuuf gara Finfinnee yommuu dhufanitti suuraa ka’ani dha